Ingabe uyazi lapho izimpilo panda?
Mhlawumbe lesi sifo uma empilweni yakho, kodwa kufanele ubone wonke umuntu. Ku-TV noma nge-Internet e-zoo noma emakhasini omagazini ethandwa. Futhi izingane eziningi panda lanamuhla kopanda odumile anime cartoon - mhlawumbe uhlamvu kakhulu.
Ingabe Uke ume yini cabanga lapho izimpilo panda, yini indawo yemvelo ibhere, ethanda ukudla futhi bear esingakanani uthela yesizukulwane? Ayikho?
Khona-ke mina asikisela siwenza ndawonye.
Inkinga ikuphi-ingabe panda. ulwazi olujwayelekile
Okokuqala, nje ungivumela uqaphele ukuthi uhlobo izilwane sasivame ukubiza nama-panda, kodwa ngazo uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko ngendlela isayensi ngokuthi panda giant. Kungani? Ngoba, cishe, kwabanye kuzoba kuvulwa, kukhona i-panda ebomvu, okuyinto kakhulu kancane, futhi Imizimba yabo nokuziphatha njenge-impungushe noma raccoon kuka nebhere.
Ngakho, i- panda giant, okuyinto namanje ngokuvamile okuthiwa bamboo bear, libhekisela isilwane ibhere umndeni. Nokho, naphezu lingakanani, zikhona izimpawu, kuhlanganise uhlobo umbala omnyama nomhlophe, isilwane lalingabulawa kalula kuqhathaniswa raccoon. Ngokusobala, ngakho-ke, ososayensi ithathe isikhathi eside kangaka ukuba ahlukanisa kanye ukutholakala emahlathini maphakathi China (ezifundazweni Tibet futhi Sichuan) isidalwa.
Chinese akazange beveza igama elehlukile. EChina ibizwa ngokuthi nebhere-cat nothando ukuze, kusukela engxenyeni kwekhulu lama-20 yesibili, ibhere panda isibe isibonakaliso wayelihlonipha futhi uphawu zwe elikhulukazi futhi elinabantu abaningi.
Inkinga ikuphi-ingabe panda. izici kwendawo yemvelo
Lezi kunalokho zezinyoni ezingavamile ezitholakala kuphela kwezifunda zezintaba ephakathi eningizimu yeChina. Iinhlokwezi zihlukaniseke ezinabantu embozwe amahlathi elina abandayo, okuyinto isimo ekahle ukukhula ngoqalo, uju ozithandayo, bear amakati.
Izindawo zawo zokuhlala kungase kubhekwe njengokwelapha indawo ababecishe babe izinkulungwane 30 amakhilomitha square. Sikhula, umuntu ngamunye kancane kancane ozuza endaweni yayo, wokugubha izimpawu zayo ezihlahleni. Ngokuvamile singasho ukuthi panda - ezincelisayo ngempela zodwa, azithintwa bephila ukuphila ngedwa. Akuvamile udle ku domain okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo.
Night - sekuyisikhathi sabo! Kwaba kusihlwa noma ebumnyameni esingangeneki bona batihlele idili real ngoqalo. Emini bancamela ukulala abahlezi ozwakala isihlahla esikhulu noma endaweni esekusithekeni yamadwala.
Akunakwenzeka ukuba uqaphele yokuthi, njengawo wonke amabhere, panda kalula ukuma ngemilenze yangemuva, eqalaza ndawo, kodwa ngokushesha ukhathele futhi uncamela namanje maningi amathuba ukuze baphumule.
Inkinga ikuphi-ingabe panda. Amaqiniso ethakazelisayo amabhere Amaqiniso abekwe ziningi ngokwanele, Ngizokwenza uhlu kuphela labo, ngombono wami, baba ezithakazelisa kakhulu.
Panda uncamela udle sonke isikhathi, yebo, ngaphandle isikhathi esisisebenzisela ukulala.
Ukudla nsuku zonke omkhulu kakhulu ukudla, Nokho, kusukela lapho, kuyaqabukela amuncwa ezingaphezu kuka-17%.
Inguqulo ukuthi laba bantu zidla bamboo - akulungile. Ungavuli bangafuni, bathola izimpande, imifino ezahlukene ihlathi impande, amagxolo omuthi amakhowe, amakhambi izimbali. Ezimweni ezingavamile kakhulu, i-panda kungaba ukuhlasela noma ezinye izilwane ezincelisayo ehlukahlukene ekudleni izinhlanzi ezazisanda kubanjwa. A yisimangaliso kubhekwa uju akhishwa zasendle izinyosi izidleke.
Ukukhulelwa ifinyelele izinga lokuzala seminyaka emihlanu, okungenani eziyisishiyagalombili, panda Uthatha kwezinsuku ezingu-95 160. Njengomthetho, ngemva kwalesi sikhathi insikazi sizala elilodwa noma amabili ingane. Nokho, yesibili, ngandlela-thile, ethola isahlulelo sokufa, ngoba ukunakekelwa kamama, ezimweni eziningi kuphela izibulo lakhe.
Izilwane ezisohlwini Incwadi Red
A uhlobo mushroom Phallus Impudicus
Inhlanzi Omul kusukela SIG umndeni. Incazelo kanye olwenzeka endaweni
Red breast Goose: incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo, ukukhiqizwa kabusha
Indochinese tiger: incazelo ngezithombe
Amathiphu stylist kanjani ukukhetha ingubo ngentombazane umnyuziki kusihlwa
Indlela yokukhetha umgqugquzeli wokushisa kwamanzi udonga. Ukushisa amanzi okuhambisa amanzi: izici, ukufakwa, ukubuyekezwa
Prussian oluhlaza elingaphakathi yesimanje
"Ephumelela kakhulu amakhono abantu abayisikhombisa" uStefanu Covey
Bone izicubu: izici kwesakhiwo nemisebenzi
"Nissan" (kagesi): Ukucaciswa, izici ukusebenza, ukubuyekezwa
Yini okufanele badle crawfish ekhaya? Ukulima futhi zizalela izici
Ukupheka isitshalo seqanda e multivarka
Cottage shizi Casserole kuhhavini - dessert kwasebusheni bami
Calandra Lark: incazelo, umsoco, ukukhiqizwa kabusha
Ukwahlukanisa ukukhiqizwa futhi ukusetshenziswa imfucuza. Ukwahlukanisa udoti ekilasini ingozi
Umphakathi wanamuhla uyazicabangela ukuluthwa ukugula noma isigwebo